Sales Network - Yantai Ishikawa Akara Technology Co., Ltd.
Mgbe ọtụtụ afọ nke mgbalị, YTSC ruru eru ịrụzu atụmatụ na nwalee synchronous ka OEM. A na-anakwere ngwaahịa ndị a n'ọhịa dịka ụgbọ ala azụmahịa, ụgbọ ala ndị njem, ụgbọ mmiri, igwe izugbe, ụlọ ọrụ petrochemical na ebe ọkụ ọkụ.
A na-enye gaskets, akụkụ roba na ọta ọkụ na injin nke ihe karịrị ụlọ ọrụ 70 dị ka FAW, DFM, SAIC Motor, Weichai Power, Wuxi Power, SDEC, YC DiesEL, DEUTZ （Dalian Diesel Engine）, Huachai Power, SINOTRUC, GAC Motor . Emebere onwe gị ihe eji egwu mmiri nke V12 (S1003030-46K gasket gasket) na ụgbọ ala nyocha maka Onye isi ala Hu Jintao na Emume ncheta nke afọ 60 nke National.
Eriri akara efere na-nakweere na petrochemical ọrụ na arịa na-tumadi ọnọ QPEC, Daqing Petrochemical, Jilin Chemical Industry, GSI, CSSC, Bohai hipgbọ mmiri-yad, wdg Ugbu a ngwaahịa na-exported na Japan, Korea, Australia, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Middle East.
A na-ejikarị efere ndị na-ekpuchi ihe mkpuchi eme ihe na isi mmiri, ndị na-eme mkpọtụ, ihe mgbochi breeki, wdg. Ngwaahịa na-aga ahịa mba ofesi site na site na ụfọdụ n'ime ha merie nkwenye ndị ahịa.